Author Topic: ကိုကိုထွန်းအေးတင်တဲ့ဟာသများ (Read 247587 times)
« Reply #200 on: May 27, 2011, 09:39:07 AM »
လူပျိုကြီး ကိုဘမောင်သည် အထက်တန်းလွှာမှ အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးကို လက်ထပ်လိုက်သည် ။ နှစ် လ ခန့် အကြာ
တွင် မိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့် လမ်းမှာ ဆုံရာ မိတ်ဆွေက မေးသည် ။
" အိမ်ထောင်ရေး အဆင်ပြေရဲ့ လားဗျ.."
" သိရင်တော့လား...သတ်ကို သတ်ပစ်မယ်..တောက် "
" ဟိုး..ဟိုး ဘာဖြစ်တာလဲ..ဘယ်သူ့ ကို သတ်မှာလဲ..ဘာကြောင့်လဲဗျ.."
" ခင်ဗျားပဲ စဉ်းစားကြည့် .. မနက်အိပ်ရာက နိုးတာနဲ့သူ့ အတွက် ကော်ဖီခါးခါး တစ်ခွက် ယူလာပေးပါလို့ ကောင်မ
အမြဲတမ်း ပြောတယ်..။ ဒင်းကို ဘယ်သူ အကျင့်လုပ်ပေးခဲ့သလဲ..သိရင်တော့လား..၊ သတ်ကိုသတ်ပစ်မယ် .တောက် "
ငါးက လူစကားဖြင့် အဘိုးကြီးကို မမျှော်လင့်ဘဲ ပြောသည် ။
" ကျမကို လွှတ်ပေးပါ အဘိုး..။ အဘိုးရဲ့ ဆန္ဒ သုံးခုကို ကျမ ဖြည့်ဆည်းပေးပါ့မယ်..."
အဘိုးကြီး မဲ့ပြုံး ပြုံးပြီး ပြန်ပြောသည် ။
" မင့် ဆန္ဒ သုံးခုကို ငါ ဘာလုပ်ရမှာလဲ...၊ ငါက ဆန္ဒ တစ်ခုပြီးတာနဲ့အိပ်ပျော်တဲ့ အကောင်ကွ.."
« Reply #201 on: May 27, 2011, 09:53:12 AM »
" ရှာ နေ တယ် ထင် လို့"
အဘွားကြီး တစ်ယောက် သားဖွားနှင့် မီးယပ်ဆရာဝန်ထံ ရောက်လာပြီး ပြောသည် ။
" နာလိုက်တာ ငါ့တူရယ်..ကူညီပါဦး "
" အ၀တ်ချွတ်လိုက်ပါ ..ကျနော် ကြည့်မယ်.."
အဘွားကြီးကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးနောက် ဆရာဝန်က ပြောသည် ။
" အဘွား..ဘာမှ အထွေအထူး မတွေ့ ဘူး..၊ အ၀တ်အစား ပြန်ဝတ်နိုင်ပါပြီ.."
" ဒါပေမဲ့..နာလှချည်လား ငါ့တူရယ်..၊ မခံမရပ်နိုင်အောင် နာနေပါလားကွယ့် "
" ကျနော် တွေ့ သလောက် အဘွား ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး..။ ဘာ နာနေတာတုန်း.."
" သွား ငါ့တူရေ..၊ သွား ၊ အောင်မယ်လေးနော်..."
" အဘွား..သွားနာရင် သွားဆရာဝန်ဆီ သွားရတယ်ခင်ဗျ..၊ ကျနော် အဘွားကို ကြည့်နေတုန်းက
ဘာဖြစ်လို့သွားနာတဲ့ အကြောင်း မပြောတာလဲ..."
" ဘယ်သိမလဲ...မင်းက အမြစ်တွေကို ရှာနေတယ် ထင်တာကိုးဟဲ့..."
« Reply #202 on: May 28, 2011, 11:00:32 AM »
" ကိ စ္စ မ ရှိ ဘူး "
ကွယ်လွန်သူ ယောက္ခမကြီး၏ အုတ်ဂူရှေ့ တွင် အထမ်းအမှတ် ကျောက်ပြားစိုက်ရန် သားမက်လုပ်သူက
ကျောင်ပြားလုပ်သောဆိုင်သို့ရောက်လာသည် ။
" ဈေးလည်းပေါ..ခန့် လည်း ခန့် ငြားတဲ့ ကျောက်ပြားတစ်ချပ်လောက် လိုချင်တယ်.."
" အင်း..တစ်ချပ်တော့ ရှိပါရဲ့ ..ဒါပေမဲ့ ကျောက်ပြားပေါ်မှာ တစ်ခြားလူရဲ့နာမည်ထိုးထားတယ်.."
" ကိစ္စ မရှိဘူး..သွားလေသူ ယောက္ခမက စာမဖတ်တတ်ဘူး.."
" လက် မှတ် ပျောက် သူ "
ငါးနှစ်သား ချာတိတ်တစ်ယောက်တည်း ညပိုင်း ဆပ်ကပ်ပွဲကို စိတ်ဝင်တစား ကြည့်နေသည် ။ ဘေးခုံတွင်
ထိုင်နေသော အမျိုးသမီးကြီးက ချာတိတ်ကို မေးသည် ။
" ချာတိတ်..မင်းက ငယ်ငယ်လေးနဲ့ဆပ်ကပ်ပွဲကို တစ်ယောက်တည်း ဘယ်လိုလုပ် လာကြည့်တာလဲကွယ့်
လက်မှတ်ကို မင်းကိုယ်တိုင် ၀ယ်တာလား..."
" မဟုတ်ပါဘူး..ဖေဖေ ၀ယ်ပေးတာပါ.."
" မင်းအဖေက ဘယ်မှာလဲ..."
" သူလား...အိမ်မှာ လက်မှတ်ပျောက်လို့ရှာနေတယ်ခင်ဗျ "
« Reply #203 on: May 28, 2011, 01:04:20 PM »
" ဘာသာစကား တစ်ခုပဲ တတ်တယ် "
" ကျုပ်မိန်းမဟာ ဘာသာစကား လေးမျိုးတောင် တတ်တာဗျ.."
" ကျုပ်မိန်းမကတော့ ဘာသာစကားတစ်မျိုးပဲ ပြောတတ်တယ်..ဒါပေမဲ့ မနက်ကနေ ညအထိ
" သက်သာလာပြီ "
" ကိုယ့်ကိုကိုယ် ၁၄ ယောက်မြောက် ဂျော့ဘုရင်လို့ပြောတဲ့ လူနာအခြေအနေ ဘယ်လိုလဲဟေ့ "
" နည်းနည်းသက်သာလာတယ် ထင်တယ်ဆရာ....ဒီနေ့ တော့ သူ့ ကိုယ်သူ ၁၃ ယောက်မြောက်
လို့ ပဲ ပြောတော့တယ်ခင်ဗျ.."
" သူ့ အတွက် မလိုဘူး "
လူနှစ်ဦး အရက်ဘားထဲ ၀င်လာကြသည် ။ ဘားအတွင်း ရောက်သောအခါ ၄င်းတို့ နှစ်ဦး တွဲခေါ်လာသော
လူကို ကြမ်းပြင်ပေါ်ပစ်ချလိုက်သည် ။
" ဟေ့ ဘွိုင်..ဗော့ဒ်ကာ ခွက်ပြည့်နှစ်ခွက်ပေးဟေ့...ဟိုကြမ်းပေါ်က လူအတွက်တော့ သောက်ရေရိုးရိုး တစ်
ခွက်ပဲ ပေး.....သူက ကားမောင်းရမဲ့သူ "
« Reply #204 on: May 30, 2011, 01:47:39 PM »
" ဒေါက်တာ ဂျက် "
ဆေးကုသမြန်သဖြင့် " ဒေါက်တာ ဂျက် " ဟု အမည်ပေးခံရသော ဆရာဝန်၏ ဆေးခန်းတွင် ဖြစ်သည် ။ ဆေးခန်းထဲသို့ 
အဘွားကြီး တစ်ဦး ၀င်လာသည် ။
" ဒေါက်တာ..ဒေါ်ဒေါ် အသားဝါးလို့မရဘူးကွယ် "
" အဒေါ့်အသက် ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ.."
" ၉၀ ပါ "
" ဒီအရွယ်အထိ ၀ါးခဲ့ပြီပဲ..ကျေနပ်တော့..၊ နောက်တစ်ယောက် "
ချာတိတ်လေး ၀င်လာသည် ။
" ကျနော် ခဲတံ မြိုချလိုက်မိတယ်.."
" ဖောင်တိန်နဲ့ရေး..၊ နောက်တစ်ယောက် "
ယောင်္ကျားကြီးတစ်ယောက် ၀င်လာသည် ။
" ကျနော် နားမကြားဘူး..ကိုယ့်ဟာကိုယ် လေလည်တာတောင် မကြားရဘူး..."
ဒေါက်တာ ဂျက် သူ့ ကို ဆေးပေးလိုက်သည် ။ လူနာက မေးသည် ။
" ဒီဆေးသောက်ရင် ကျနော် နားကောင်းကောင်း ကြားရမလား ဟင် .."
" ဟင့်အင်း...လေလည်သံ ပိုကျယ်လာမယ်...နောက်တစ်ယောက် "
နောက်ယောင်္ကျားတစ်ယောက် ၀င်လာသည် ။
" ဒေါက်တာ့ကို ပြောရမှာ ခပ် ရှက်ရှက်ပဲ..၊ ဘယ်လို ပြောရမလဲ.. ဟိုးဒင်းလေ..ဟို ..ဟို
ကျနော့် " ပစ္စည်း " လေ....ကျနော်စီးတဲ့ ဖိနပ်ကိုပဲ အမြဲတမ်း ကြည့်နေတယ်ခင်ဗျ.."
" ဖိနပ်ကို ခေါင်းပေါ်တင်ထားလိုက် .."
« Reply #205 on: May 30, 2011, 04:33:59 PM »
" ကိုယ့် ပ စ္စ ည်း ကိုယ် ယူ "
သွားဆရာဝန်၏ ဆေးခန်းတွင် ဖြစ်သည် ။ သွားဆရာဝန်က လူနာကို ပြောသည် ။
" ကိုက်နေတဲ့ သွားကို ကျနော် နှုတ်တော့မယ်..ပြင်ထားပေတော့.."
လူနာသည် ကြောက်လန့် တကြားနှင့် ကုလားထိုင် လက်တန်းနှစ်ဖက်ကို တအား ဆုတ်ထားသည် ။
နှုတ်လိုက်သော သွားကို ဆရာဝန်က လူနာကို ကမ်းပေးသည် ။
" ရော့..နာနေတဲ့ ခင်ဗျား သွား "
လူနာကလည်း ကုလားထိုင်လက်တန်းကို ဆရာဝန်ဘက် ထိုးပေးသည် ။
" ရော့..ဆရာ့ ကုလားထိုင် လက်တန်းတွေ "
" နောက် ကျ သွား ပြီ "
" ဆေးလိပ်နဲ့အရက်ကို ဖြတ်လိုက်ရင် အန်ကယ့်လ် အသက် ၈၀ အထိ နေရနိုင်တယ်ခင်ဗျ.."
" နောက်ကျသွားပြီ .ဒေါက်တာ "
" ဘာဇြစ်လို့ လဲ.."
" အန်ကယ့်လ် အသက် ၈၄ နှစ်ရှိပြီ.."
« Reply #206 on: June 03, 2011, 09:44:46 AM »
" အ တွေ့အ ကြုံ "
ယောင်္ကျားဖြစ်သူ တစ်ခြားမိန်းမတစ်ယောက်နှင့် ဖောက်ပြန်နေကြောင်း ၊ မိမိဘာလုပ်ရမလဲ ဆိုသည်ကို
အကြံပေးစေလိုကြောင်း အိမ်ထောင်ရှင် သမီးက အဖေ့ကို ပြောရာ အဖေက ပြန်ဖြေသည် ။
" သမီး မေမေကိုမေးကြည့် .. သူက ဒီကိစ္စမှာ အတွေ့ အကြုံ ပိုရှိတယ်.."
" မေ တ္တာ ပျယ် ပြီ လား "
" ရှင် ကျမကို မချစ်တော့ဘူး ထင်တယ်.."
" မင်း ဘာဖြစ်လို့ဒီလို ထင်ရတာလဲ.."
" အရင်တုန်းက ရှင် ခရီးထွက်ရာက ပြန်လာတိုင်း ပထမဆုံး ကုတင်အောက်ကို ငုံ့ ကြည့်တယ်.
ဗီရိုကို ဖွင့်ရှာတယ်..၊ အခုတော့ ရေခဲသေတ္တာနဲ့ဟင်းအိုးကိုပဲ ဖွင့်တာကိုး..."
" ဟိုတွေး..ဒီတွေး တွေးမနေစမ်းပါနဲ့မိန်းမရယ်...၊ ငါကလွဲလို့မင်းကို ဘယ်သူမှ မကြိုက်ဘူး
ဆိုတာ ငါ သဘောပေါက်လာလို့ ပါ.."
« Reply #207 on: June 03, 2011, 10:01:51 AM »
" ကျနော့် ဇနီးဟောင်းနဲ့အခု လက်ရှိဇနီး မမျှော်လင့်ဘဲ တွေ့ သွားကြတယ်..ပထမတော့
သူတို့ နှစ်ယောက် ရန်ဖြစ်ကြတယ်..၊ နောက်မှာ ရင်းနှီးသွားကြပြီး ကျနော် ယူမဲ့ နောက်
မိန်းမကို ၀ိုင်းပြီး ရိုက်ကြတယ်..။ အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီး ကျနော် အလိုလိုနေရင်း အားငယ်လာ
" မယ် ချူ ချာ "
မိန်းမနှင့် ကွာရှင်းလိုကြောင်း ကိုချူချာ တရားရုံးသို့လျှောက်လွှာတင်သည် ။ တရားသူကြီးက
ကိုချူချာ ကို မေးသည် ။
" ကိုချူချာ...ခင်ဗျားမိန်းမဟာ အင်မတန် စဉ်းစာဉာဏ်တုံးတယ်......ဒါကြောင့် ကွာချင်တယ်လို့ 
ခင်ဗျား လျှောက်လွှာမှာ ဖော်ပြထားတယ်..၊ ဘယ်လို တုံးသလဲ ..ရုံတော်ကို တင်ပြပါ .."
" တရားသူကြီးမင်းပဲ စဉ်းစားကြည့်ပါ.. ကျနော် သူ့ အတွက် ရေခဲသေတ္တာ ၀ယ်ပေးထားတယ်..၊
ဒါပေမဲ့ ..လျှော်စရာရှိရင် ..မြစ်ဆိပ်သွားပြီး အ၀တ်တွေကို လျှော်တုန်း...."
« Reply #208 on: June 03, 2011, 10:11:53 AM »
" သုံး မွှာ ပူး အ ဖေ "
ဇနီးသည်ဖြစ်သူ သုံးမွှာပူးမွေးသည့် သတင်းရသည်နှင့် ကိုချူချာ ရှူးရှူးရှဲရှဲနှင့် ဒေါသပုန်ထသည်။
မိတ်ဆွေများက အံြ့ာသစွာ ၀ိုင်းမေးကြသည် ။
" ကိုချူချာ ခင်ဗျား ဘာဖြစ်လို့ဒေါပွနေရတာလဲ...သုံးမွှာပူး မွေးတဲံအတွက် ၀မ်းသာရမဲ့ ဥစ္စာပဲ "
" ဒီကောင်မ ကျုပ်အပြင် တစ်ခြား ယောင်္ကျား နှစ်ယောက်နဲ့အိပ်သေးတယ်ဆိုတာ ပေါ်သွားတဲ့နောက်
ကျုပ်က ၀မ်းသာ ရမတဲ့လား...တောက်.."
" မေ့ မှာ စိုး တယ်. "
ရဲသင်တန်းကျောင်းမှ ပူပူနွေးနွေး သင်တန်းဆင်းလာသော ရဲသား ကိုချူချာသည် ပထမဦးဆုံးအကြိမ်
လူဆိုးတစ်ယောက်ကို ဖမ်းသည် ။
" လက်မြှောက်...နို့ မဟုတ်ရင်...."
လူဆိုးက ပြန်မေးသည် ။
" နို့ မဟုတ်ရင် ဘာဖြစ်မှာလဲ.."
" စကားကိုဖြတ် မပြောနဲ့ ..ဘာဆက်ပြောရမယ်ဆိုတာ ငါ မေ့သွားဦးမယ်..."
« Reply #209 on: June 03, 2011, 10:26:22 AM »
" တစ် ယောက် မှ မ ရှိ ပါ "
လူဆိုးများလက်မှ လွတ်အောင် ကိုချူချာ ပြေးရင်း ရေတွင်းထဲ ဆင်းပုန်းသည် ။ လူဆိုးဂိုဏ်း
ခေါင်းဆောင်က ရေတွင်းထဲ ငုံ့ ကြည့်ပြီး အော်သည် ။
" တစ်ယောက်ယောက် ရှိသလားဟေ့.."
ကိုချူချာက ပဲ့တင်သံပုံစံဖြင့် ပြန်အော်သည် ။
" တစ်ယောက်ယောက် ရှိသလားဟေ့..... တစ်ယောက်ယောက် ရှိသလားဟေ့.."
" တစ်ယောက်မှ မရှိဘူး ထင်တယ်.."
" တစ်ယောက်မှ မရှိဘူး ထင်တယ်..... တစ်ယောက်မှ မရှိဘူး ထင်တယ်.."
" ဗုံးတစ်လုံး ပစ်ချလိုက်ရင် ကောင်းမလား.."
" မပစ်နဲ့မပစ်နဲ့..တစ်ယောက်မှ မရှိတာပဲ.."
" ၇ိုး သား တဲ့ ကို ချူ ချာ "
" ခြံလုပ်သား ကိုချူချာသည် မြေကြီးများကို တူးဆွရင်း ရွှေဒင်္ဂါးများအပြည့်ပါရှိသော မြေအိုး
တစ်လုံးကို တွေ့ သည် ။ ရိုးသားသော ကိုချူချာသည် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကို မိမိအတွက် ယူ
လိုက်ပြီး ကျန်ရှိသည်တို့ ကို မြေထဲ ပြန်မြှုတ်လိုက်သည် ။ "